Kutaalee haaraa , ykn geessituuwwan kutaalee galmee biroo keessaa galmee ammeetti saaguu dandeessa. Yoo kutaa akka geessituutti saagde, yeroo galmee maddaa haaromsitu qabeentaan geessituu ni jijjiirama.
Kutaa haaraa saaguuf:
Galmee kee keessatti bakka kutaa haaraa itti saaguu barbaaddu cuqaasi, ykn barruu gara kutaatti jijjiiruu barbaaddu filadhu.
Yoo barruu keewwata wajjiin mul'atu filatte, barichi ofumaan gara keewwata haaraatti jijjiirama.
Saagi - Kutaa filadhu.
Sanduuqa Kutaa Haaraa jedhu keessatti, maqaa kutichaa barreessi.
Kutichaaf dirqaalee qindeessi, itti aansudhan Saagi cuqaasi.
Kutaa akka geessituutti saaguuf:
Kutaa akka geessituutti saaguu keetin dura, jalqaba kutaalee galmee maddaa keessatti uumuu qabda.
Yeroo galmee kutaalee wal qabsiifaman qabu bantu, qabeentota kutaalee haaromsuuf LibreOffice kaasaa sii ta'a. Hujeekaan wal qabsiiftuu haaromsuuf, Meeshaalee - Haaromsi - Wal qabsiiftota filadhu.
Kutaalee walqabatoo galmeewwan HTML keessatti saaguu dandeessa. Yeroo fuula sakattaatota saphaphuu keessaa agarsiiftu, qabeentaan kutaalee qabeentaa kutaalee wayita galmeen HTML dhumarratti ol kaa'ame walgita.
Galmee kee keessatti bakka kutaa geessituu saaguu barbaaddu cuqaasi.
Naannoo geessituu keessaa, saanduqa filannoo geessituu filadhu.foddaawwan jalatti, yeroo kutaan galmee maddaa keessa jiru jijjiiramu qabeentaa kutaa ofumaan haromsuuf DDE filachuu dandeessa.
Galmee kutaa itti geessuu barbaaddu qabatee sana agarsiisi, sana booda Saaguu cuqaasi.
Saanduqa Kutaa keessaa, kutaa saaguu barbaaddu filadhu.
Title is: Kutaalee Saaguu